ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိ ဘုရားသခင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2019-04 > အဆိုပါပိုကောင်းရွေးချယ်မှု
ပါးစပ်ဖျားဖြင့်ခေါင်းကိုဖြတ်လိုက်သည့်အခါလှည့်လည်သွားလာနေသောကြက်တစ်ကောင်ရှိသည်။ ဤအသုံးအနှုန်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး သည်အလွန်အလုပ်များသည့်အခါထိန်းချုပ်မှုမရှိ၊ ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်များတဲ့ဘဝနဲ့ဆက်စပ်နိူင်တယ်။ စံသတ်မှတ်ချက်အဖြေကို "ခင်ဗျားဘယ်လိုလဲ" is: "ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါချက်ချင်းသွားရမှာပေါ့!" ဒါမှမဟုတ် "ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအချိန်မရှိဘူး" ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အလုပ်တစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့၊ အနားယူရန်နှင့်အနားယူရန်အချိန်မရှိတော့သည့်အထိပြေးကြပုံရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဆက်မပြတ်ဖိစီးမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မောင်းနှင်အားနှင့် အခြားသူများမှ ညွှန်ကြားခံရခြင်း၏အဆက်မပြတ်ခံစားချက်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လူသားချင်းဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေပါသည်။ သတင်းကောင်းကတော့ အလုပ်များနေတာဟာ သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်တတ်တယ်။ လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် ယင်းကိုဖော်ပြသည့် အံ့ဩဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါရှိသည်– “ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့နှင့်အတူ သွားစဉ်တွင် မာသအမည်ရှိသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် သူ့အိမ်သို့ ဖိတ်ခေါ်သည့် ရွာတစ်ရွာသို့ ရောက်လာသည်။ သူမတွင် Maria ဟုခေါ်သော ညီမတစ်ယောက်ရှိသည်။ မာရိသည် သခင်ဘုရား၏ခြေတော်ရင်း၌ ထိုင်၍ သူ့စကားကို နားထောင်လေ၏။ Martha သည် သူမ၏ ဧည့်သည်များ၏ စိတ်ချမ်းသာမှုကို သေချာစေရန် အလုပ်များစွာ လုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူမသည် သခင်ယေရှုရှေ့၌ ရပ်ကာ၊ သခင်၊ ကျွန်ုပ်၏ညီမသည် ကျွန်ုပ်ကို အလုပ်အားလုံးကို တစ်ယောက်တည်း လုပ်ခွင့်ပေးခြင်း မှန်ကန်သည်ဟု ထင်ပါသလား။ ငါ့ကိုကူညီဖို့ပြောပါ! မာသ၊ မာသ၊ သခင်ဘုရားက၊ သင်သည် ဤမျှလောက်များစွာသော ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်နေသော်လည်း တစ်ခုတည်းသာ လိုအပ်သည်။ မာရိသည် သာ၍ကောင်းသောအရာကို ရွေးယူ၍ မယူသွားရ။” (လု 10,38-42 NGÜ)။
မာသကိုယေရှုညင်ညင်သာသာလွှဲပြောင်းပေးတဲ့နည်းကိုငါသဘောကျတယ်။ မာသသည်များစွာသောအစားအစာများကိုပြင်ဆင်သည်၊ ၎င်းသည်အစားအစာအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းနှင့်၎င်းအားသူမအားအာရုံစူးစိုက်စေသည့်အခြားအရာများစွာပေါင်းစပ်ထားခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သိသည်မှာသူတို့၏အလုပ်များခြင်းကသူတို့ကိုယေရှုနှင့်အတူအချိန်မဖြုန်းရန်တားဆီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုကို တိုင်တန်းသောအခါတွင်၊ သူ့တွင် အရေးကြီးသောစကားတစ်ခွန်းရှိသောကြောင့် သူ့အား ပြန်၍ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရန် အကြံပြုခဲ့သည်။ “မင်းကို ကျွန်လို့ မခေါ်တော့ဘူး။ ကျွန်သည် မိမိသခင် ဘာလုပ်နေသည်ကို မသိ။ ငါမူကား၊ အကြောင်းမူကား၊ ငါ့ခမည်းတော်ထံမှ ကြားသမျှကို သင်တို့အား ငါပြပြီ။” (ယော၊ ၁5,15).
တခါတရံငါတို့အားလုံးပြန်လည်အာရုံစိုက်သင့်သည်။ မာသကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုအတွက်ကောင်းသောအရာများပြုရန်အလွန်အလုပ်များပြီးအာရုံပျံ့လွင့်နိုင်ပြီးသူ၏ရောက်ရှိခြင်းကိုပျော်မွေ့။ နားထောင်ရန်လျစ်လျူရှုနိုင်သည်။ ယေရှုနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက ဦး စားပေးဖြစ်သင့်သည်။ သခင်ယေရှုက“ မာရိသည် သာ၍ မြတ်သောအရာကိုရွေးယူလေ၏။ တစ်နည်းဆိုရသော်မာရိသည်သခင်ယေရှုနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုသူ၏တာ ၀ န်များထက်သာလွန်စေသည်။ လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အလုပ်များအမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်မယ့်အစားငါတို့လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကိုဘယ်လောက်မကြာခဏအလေးပေးဖော်ပြသလဲ။ ဘုရားသခင်သည်သင့်အားသူနှင့်သင်၏လူလူချင်းများနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအတွက်ဖန်တီးခဲ့သည်။ မာရီယာနားလည်သဘောပေါက်ပုံရသည်။ မင်းလည်းလုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်